Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ကိုတစ်ဆင့်မည်သို့ Install လုပ်ရမည်နည်း Linux မှ
Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ကိုတစ်ဆင့်မည်သို့ Install လုပ်ရမည်နည်း
အကယ်၍ သင် Linux တွင်အသစ်ရောက်ရှိနေပါက Ubuntu ကိုစမ်းသုံးရန်အကြံပေးလိမ့်မည်။ အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဖြန့်ဖြူးမှုအပြင်ဖော်ရွေသောအမြင်ရှုထောင့် (သင် Windows တွင်သင်အသုံးပြုသောအရာနှင့်ကွဲပြားသော်လည်း) သည်မွေးဖွားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ "လူသားများအတွက် Linux" ။ ဤအရစ်ကျအသစ်ဖြင့်မည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြသည် Ubuntu ကို 12.10 Quantal Quetzal အဆင့်တစ်ဆင့် ... ဟုတ်ကဲ့ Dummy.
Ubuntu 12.10 ကိုမထည့်သွင်းမီအဆင့် ၃ ဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
download, Ubuntu ISO ပုံရိပ်။ မည်သည့်ဗားရှင်းကို download လုပ်ရမည်ကိုသင်မသိပါကကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးဖတ်ရန်အကြံပြုပါသည် နိဒါန်း မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုမဆိုသင်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခြေခံသဘောတရားအချို့သို့
Pendrive မှ boot တက်ရန် BIOS ကိုမှန်ကန်စွာ configure လုပ်ပြီးသည်နှင့်စက်ကို pendrive ဖြင့် restart လုပ်ပါ။ ခဏကြာပြီးနောက် Ubuntu boot loader GRUB2ပေါ်လာမည်။ အခြေခံအားဖြင့်သွားရန်နည်းလမ်း ၂ ခုရှိသည်။ Ubuntu ကို install မလုပ်ပဲပထမ ဦး ဆုံးစမ်းကြည့်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်၍ သင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲကသင့်ကိုကောင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင်၊ ဒုတိယရွေးစရာမှာစနစ်ကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်တော့မည် Install မလုပ်ဘဲ Ubuntu ကိုသုံးပါ.
Ubuntu boot ပြီးတာနဲ့ icon ကိုနှိပ်ပါ Ubuntu 12.10 ကို Install လုပ်ပါ။ installation wizard ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးရွေးချယ်ရမည့်အချက်မှာ installation ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ပါ စပိန်ထို့နောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Ubuntu ကို Install လုပ်ပါ.
သင်ကနိမ့်ဆုံးတပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြည့်မီကြောင်းအတည်ပြုပါ ဆက်လုပ်ပါ။ သတိပြုသင့်သည်မှာတစ်ခုတည်းသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှာလိုအပ်သော disk space ရှိရန်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိရန်အကြံပြုထားသော်လည်းအထူးသီးသန့်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်အနေဖြင့်သင်အဆင်ပြေမည့်အချိန်များအတွက် packages များ၏ download ကိုကျော်သွားနိုင်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်သီးသန့်လိုအပ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း power outlet နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အကြံပြုပါသည်။ အကယ်၍ သင် laptop တစ်လုံးကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက၎င်းသည်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။ installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်စွမ်းအင်များစွာလိုအပ်သောကြောင့်စက်၏ installation အလယ်၌စက်ကိုပိတ်ခြင်းသည်မကောင်းသော်လည်း၊ ၎င်းသည် operating system ၏ installation ကိုကိုင်တွယ်သည်။
ထို့အပြင်တပ်ဆင်မှု၏ဤအပိုင်းတွင် Ubuntu ကို install လုပ်သောအခါ system updates များကို download လုပ်မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ရန် option ကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်စစ်ဆေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်မထောက်ခံပါ။ ၎င်းသည် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိသိသာသာနှောင့်နှေးနိုင်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာတတိယပါတီဆော့ဝဲလ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာအခမဲ့မဟုတ်သောမီဒီယာဖိုင်များဖြစ်သည့် mp3 ဖိုင်များသို့မဟုတ် YouTube ၌ဗီဒီယိုအချို့သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်ရှိဝက်ဘ်ပေါ်ရှိမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ installation ဆော့ဝဲလ်ပြီးသွားသည်နှင့်ဤဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်လိုသည်။ သို့သော်ဤရွေးချယ်မှုကိုစစ်ဆေးပြီး installation လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပြုလုပ်လိုပါကပြproblemနာမရှိပါ။
ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ထိုစက်ပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောလည်ပတ်မှုစနစ် (သို့) စနစ်များပေါ် မူတည်၍ မျက်နှာပြင်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်ကိုရှင်းလင်းရန်လိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်တွင် Ubuntu ဗားရှင်းအဟောင်းကိုထည့်သွင်းထားပါက၊ စနစ်အသစ်ပြောင်းရန်ထို option ကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
ဤဖြစ်ရပ်တွင်ပုံမှန်မြင်ကွင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ၀ ယ်သည်၊ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး ၈ နှင့်အတူရောက်လာသည်၊ အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်ကြိုးစားချင်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်။
သွားရန်နည်းလမ်း (၃) ခုရှိသည်။
a) operating system အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီး install လုပ်ပါဤအရာသည်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပြီးအပေါ်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။ သင်၏ခေါင်းကိုအပူပေးရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသည်။
b) Ubuntu ကို Windows နှင့်အတူ Install လုပ်ပါ: ဒီရွေးစရာကကျွန်တော်တို့ကို Microsoft Windows ကိုလက်ရှိတပ်ဆင်ခြင်းနဲ့အတူမျှဝေတဲ့တပ်ဆင်မှုကိုလုပ်ဆောင်စေတယ်၊ ​​ငါတို့စက်ရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ် disk disk space ထဲက Ubuntu Linux အတွက်အခန်းကန့်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ရွေးစရာကမ်းလှမ်းတယ်၊ partition ရဲ့အရွယ်အစားကိုတိုက်ရိုက်အရွယ်အစားပြောင်းပေးနိုင်တယ်၊ installer ပေးတဲ့ dialog ။
c) Disk ကိုကိုယ်တိုင်ခိတ်ပိတ်လိုက်ပ။.
တတိယ option ကိုသင်ရွေးပါက၊ disk partitioning wizard စတင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, ဒီခြေလှမ်း optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်ကိုသိသောအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိအဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်သာအကြံပြုပါသည်။ မှားယွင်းသောအဆင့်တိုင်းသည် disk ပေါ်ရှိဒေတာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကဒီအချက်ကိုမစွန့်စားချင်ရင်၊
ဤရွေးချယ်မှုကိုသင်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်သည် disk ကိုအခန်း ၃ ပိုင်းခွဲရန်ဖြစ်သည်။
ကိုနှိပ်ပါ ယခုသွင်းပါ။ ပထမအချက်မှာအချိန်ဇုန်ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
သငျသညျ username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုတယ်, ကွန်ပျူတာများအတွက်အမည်နှင့် log in ဝင်ရန်စကားဝှက်တောင်းရန်လိုအပ်သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။ သင်ဤစက်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၏လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ခြင်းမရှိလျှင်ဤသည်မှ (ကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုနှေးကွေးစေနိုင်သောကြောင့်) ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်တွဲများကိုလည်းစာဝှက်နိုင်သည်။
ခဏတာပြီးနောက်ဖိုင်မိတ္တူပြီးသွားလိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်း Ubuntu ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြသောပုံအချို့ကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးသင်အသုံးပြုသော disk သို့မဟုတ် pendrive ကို restart လုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ကိုတစ်ဆင့်မည်သို့ Install လုပ်ရမည်နည်း
Ubuntu ကိုကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်သည်။ (( ကော်ပီဖိုင်များတပ်ဆင်ပြီးဒေါင်းလုပ်အသစ်များကိုဒေါင်းလုပ်ချသည့်အချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ပြန်သွားသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်မှုကိုပြန်ပြောင်းလိုက်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်သည် Hp 420 2gb ram memory, 320 hard disk, processor) Intel Dual Core T4500 2.33gHz ဂရပ်ဖစ်သည် 64mb ဖြစ်သည်
Jordan Camey သို့ပြန်သွားပါ
Oni လင့်ခ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်၊ linux ပါတဲ့အခြား system ရှိသလား။ ဒါမှမဟုတ် ubuntu လား။
Oni Link ကို Reply
Carlos GELPUD ဟုသူကပြောသည်
ဒါပေမယ့် Linux Linux မှာစလုပ်ဖို့ကတော့ personal pc မှာတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ် http://www.slideshare.net/zer0/debian-vs-ubuntu
CARLOS GELPUD သို့စာပြန်ပါ
သင့်တွင် administrator အခွင့်ထူးကိုမရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသင့်ပါသည်။ sudo နှင့်သင်၏ထည့်သွင်းမှုစကားဝှက်သည် linux အသုံးပြုသူများအုပ်စုထံမှအကူအညီရယူပါ။
google သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုသည် ၄ ​​င်း၏ chrome တောင်မှလိုက်ဖက်သောပြproblemနာမဟုတ်ပါ၊ ပြုပြင်ထားသော ubuntu ဖြစ်သည်
ကားလို့စ်ကိုသင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးပါပဲ Wubi မှ Ubuntu ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခန်းကန့်ကို format လုပ်ချင်သည့်နေ့ကဲ့သို့သောပြproblemsနာအချို့ရှိသည်။
အဆိုပါ bios အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် Boot အရာတစ်ခုကိုသင်ထည့်သွင်းအဖြစ်က install လုပ်ပါ။
အခြားရွေးချယ်စရာများ = winan or excel ကဲ့သို့ကြိုက်နှစ်သက်မှုအား windos သို့မဟုတ် windows အတွင်းရှိအတူတကွထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် option သည်အခန်းကန့်များ၏ချည်နှောင်ခြင်းမှကင်းလွတ်နိုင်သည်။
သို့မဟုတ်ထိုမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းလိုသော disk ၏မည်သည့်အခန်းကန့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုနိုင်သနည်း။
အော်စကာ Morales ရဲ့အဖြေကိုကြည့်ကြည့်ပါ ဦး Ubuntu ကိုအစပြုသူတွေအပေါ်ပိုပြီးယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲဆိုတာငါမေ့ခဲ့တယ် - အခြားတစ်ခုမှာ iso installer cd ဖြင့်၎င်းတို့ကို ext3 နှင့် format ပြုလုပ်ရန် (သို့) mount point များကို partitions သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို cd iso နဲ့လည်းလုပ်နိုင်တယ်
ငါ partition တစ်ခုမှာ ubuntu ကို install လုပ်ပြီးရင် windows partition မှာရှိခဲ့တဲ့ ubuntu ဖိုင်တွေထဲကကြည့်ချင်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ် ????
သင်မည်သို့သန့်ရှင်းနိုင်သည်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ usb ဖိုလ်ဒါများသည် ၀ င်းဒိုးတွင်ပြန်လည်အသုံးချမှုကိုငြင်းပယ်သည်
အော်စကာ Morales ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ငါ Partition Magic နဲ့ partition တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် partition ဖြစ်ရင်တခြား operating system တွေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ??
အခန်းကန့်တစ်ခုကိုလုပ်လို့ရလား၊ ဒါမှမဟုတ် Windows7ဘေးမှာပေးသင့်သလား။
Oscar Morales အားပြန်ပြောပါ
အကယ်၍ အဆင်ပြေပါက၊ အနည်းဆုံး three / "minimum 8 gb" ကိုဖန်တီးရန်၊ D: "သင်၏ pc ၏သိုးထီးနှစ်ဆ"၊ "နိမ့်ဆုံး3gb" နေရာတွင် D: နောက်မှရှေ့သို့ "ဖိုင်များကိုမပျက်စီးစေရန်" လဲရန်အကြံပြုလိုသည်။
Tito vilanova ဟုသူကပြောသည်
gmail (သို့) webapp ပေါ်မှာအပြစ်တင်ပါ၊ ငါတို့အားလုံးအတူတူပဲဖြစ်မယ်လို့မထင်မမှတ်နှင့်။
Tito Vilanova အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဤအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့် HP PC အဟောင်းတစ်လုံးရှိသည် - ၄.၆ ဂါဘမ် DDR4၊ ၂.၆၆ Ghz Intel Core2Duo ပရိုဆက်ဆာ၊ Nividia 2Gs ၏ 2,66 Gb ဗီဒီယိုကဒ်၊ hard disk 1 Gb, ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ ငါ Quantal Quetzal ကို install နိုင်မလဲ? (fluency ပြproblemsနာမရှိရင်?)
ဒါကအားလုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟောင်းနွမ်း။ ငါ ၃ နှစ်အရွယ်လက်ပ်တော့ပ်နဲ့သိပ်ပြီးအားမကောင်းဘူး၊ 3MB ati နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ latency low audio recording လုပ်တယ်။ quantal အောက်မှာဂိမ်းအသစ်ကစားတယ်။
ငါ restart လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ် system ကို ၀ င်ရမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ဖို့ grub မရပါဘူး။
Susho Axe အားပြန်ကြားပါ
သင်အခန်းကန့်၌ရှိစဉ် boot loader ကိုမည်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်ရမည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည် dev / sda ၌သေချာစေပါ (များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်)
Windows ဘေးရှိ Install Ubuntu ကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲလိုက်သောအခါ Windows သို့မဟုတ် Ubuntu ဆိုလျှင်မည်သည့်အရာသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း
အယ်လ်ဗာ gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Ubuntu ကို install လုပ်ရန်သင်ခန်းစာသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်မှန်ကန်ပုံမပေါ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်၊ ၀ င်းဒိုးကမကောင်းဘူးလို့မပြောချင်ဘူး၊ ဒါဟာပြောင်းပြန်လေးမွတျဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်လွဲချော်သွားတာရ။
Elver Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ရော်ဂျာ Eduardo ဟုသူကပြောသည်
သို့သော်သူက windows8 ဘေးတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ အရွယ်အစားပြောင်းနိုင်သောသေတ္တာနှစ်လုံးပေါ်လာသည်။ ပြtheနာမှာမည်သည့်သေတ္တာသည်မည်သည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုမပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Ubuntu 12.04 နဲ့တူမယ်ဆိုရင်ညာဘက်မှာ ubuntu၊ ဘယ်ဘက်မှာ windows ကပါ။
Roger Eduardo ကိုပြန်ကြားပါ
အရမ်းကောင်း esparza ဟုသူကပြောသည်
alonso esparza အားပြန်ပြောပါ
အန်တိုနီယို Alcaraz placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
ubuntu ကို HP L110 mini laptop ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ချင်တယ်၊ ဒီ့မှာ CD (သို့) DVD သာ USB မရှိဘူး။ quetzal ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။
Antonio Alcaraz အားပြန်ပြောပါ
ဒီအခမဲ့ LINUX ဆော့ဖ်ဝဲကိုစတင်ခဲ့သူတွေကိုမိုက်ကရိုဆော့ဖ်လိုကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့မကြိုးစားဘဲကြွယ်ဝစွာချမ်းသာလာပြီးဘီလ်ဂိတ်စ်မှာပိုက်ဆံအများကြီးရှိပြီးသူတို့တီထွင်ထားတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့စျေးနှုန်းကအရမ်းများတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိသူတွေဆီကိုဆက်ပြီးကူညီပေးပါ။ ရလဒ်များဤမျှလောက်ပိုက်ဆံနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဘို့ ???? သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ တရားမ ၀ င်သန့်စင်မှုအတွက်အမေရိကန်ကသူ့ကိုတရားစွဲသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ... Ubuntu Windows 8 ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ Windows 8 ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြိုတင်တပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Ramon Lozano ဟုသူကပြောသည်
သင်၏အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဤစနစ်တွင်နေထိုင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုဆိုသောကြောင့် XP တွင်၎င်းကိုငါတပ်ဆင်နိုင်မလားသိလိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ramón Lozano အားပြန်ကြားပါ
တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ဆာဗာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုမည်သို့အစပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် Windows Wail Mail နှင့်ဂီတတွင်ကျွန်ုပ်မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်မည်နည်း။
JORGE WIEDMAN သို့ပြန်သွားပါ
Ubuntu 16.04 ကို scratch မှဘယ်လို install မလဲ။
LibreOffice 4.0.0 RC1 တွင် Personas အတွက်အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်
Android SDK သည်အခမဲ့ software မဟုတ်တော့ပါ